Namhlanje, abathengi bamaziko obuhle banokukhetha iinkonzo ezahlukeneyo zempilo kunye nokuphucula imbonakalo yabo. Ukongeza kwenkathalo ye-hardware, ungaphinde unikezele ngeendidi ezahlukeneyo zokuxilonga ezisoloko zixabiswa ngabasetyhini. Iinkqubo ezinjalo azigcini nje kwaye zikhulule ukuxhatshazwa, kodwa zibuye zivuselele kwakhona. Uninzi kuninzi, uluhlu lwamathambo lubandakanya ukusikwa kweSpeyin, okanye ngenye indlela kuthiwa yi-chiromassage. Ngoku siya kuqhelana naye.
Ukuba i-massage eqhelekileyo siye sahlala sisigxina, ngoko iSpeyin iselula. Ugqirha waseSpeyin u-Enrique Garcia wenyuka ngale ndlela, ethatha isiseko sobugcisa be-chiromassage, echazwe nguDkt Ferrandis kwiminyaka engama-20 yekhulu lokugqibela. Ukongezelela, ezinye iindlela ezivela kwi-yoga kunye nesayensi ye-Ayurvedic zibekwe ngendlela yeendlela.
U-Enrique Garcia waqulunqa izikhundla ezintathu zobugcisa bokusilalisa iSpain.
Awukwazi ukuvumela ukusetyenziswa kwamacandelo amaninzi, enye kuphela. Ngenxa yokuba isicatshulwa ngasinye sinempembelelo yaso, ngoko ke, kunye nokusetyenziswa kwamacandelo amabini umntu angabandakanyeka omnye.
Ngokukodwa, ubuchule bokusilalisa iSpain kubandakanya ngaphezulu kweendlela eziliqela zeendlela. Ngale ndlela eyahlukeneyo, iimpawu zomthengi ngamnye ziqwalaselwa, kwaye ngaphezu koko, akukho nto isetyenziselwa iindlela ngenxa yokungafani kwazo, kwaye ukusilalisa kuyasebenza kakhulu.
Ubuchule balo bunzima bubuninzi lweplastiki, ngoko akunakwenzeka ukuba uzive naluphi na intlungu, kodwa nangona kunjalo, inkosi iyangena ngaphakathi. Ukubamba i-massage kubangelwa yimpembelelo yezempilo ye-endometrines, ebangela uvuyo nokuzonwabisa kumntu xa bevela.
Ngaphambili kwakucacisiwe ukuba ubugcisa bokubuthelwa kwe-Enrique Garcia kusekelwe kwindlela yokwenziwa kwe-chiromassage kaDkt Ferrandis. I-Etiquette ijoliswe ekuqiniseni izicubu ze-muscle nasekupheliseni i-pathologies yayo. I-Chiromassage yenziwa ebusweni, ezinkundleni ezingaphantsi nangemuva, kuba ezi ziyinxalenye ezinzima kakhulu. Kwiseshoni yonke, akukho kuphinda kwimivuzo yokuthobela. Okokuqala, umntu kufuneka aphumule, ngoko ukuhlaziya akuqalisi ngokufudumala, kodwa ngokuphumla. Emva koko, kusetshenziswe izakhono ezijongeyo, ngokuqhelekileyo kwimiqulu yeesetyhula eyenziwa ngamanwe okanye entendeni.
Ukuxilwa kweSpain kufaka iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo.
I-teknoloji ye-Miotensivnaya inefuthe eliphumayo kuyo yonke imisipha, kwinkqubo yokucebisa, i-joints iyasebenza, kwaye isebenza ngokubhaliweyo. Olu buchule lubuyisela ukunyaniseka kwe-joint musculo-jointly.
Inkqubo ye-Samatoemotional iqinisa inkqubo ye-nervous. Apha, ingqwalasela ibhekiswe ekuhlukeni kweentlungu-ezi zixhobo zokuphucula kunye nezenzo ezinzulu zokwaneleyo ukucaphukisa iindawo zokucinga. Ukunyuka okunjalo kwenziwa ngeminwe okanye ngesundu kwiindlela ezihlukeneyo, kunye namandla ohlukeneyo oxinzelelo kunye nezantya ezahlukeneyo. Kwenzeka ukuba abenzi bezandla basebenzise ezinye izinto ukwenzela ukuphucula umgangatho: iintsiba kunye namatye.
I-drainage ye-lymphatic yindlela eyenza ukwanda kwemveliso kunye nokutya okuvela kwiifom.
Inqubo ye-Hemolymphatic ibonisa ukujikeleza kwegazi kwendawo, iyanciphisa uxinzelelo lwe-intracranial and blood pressure.
Inkqubo ye-neurosedative ijoliswe ekunciphiseni uxinzelelo, ukunganakwa, ukukhungatheka, ukuphazamiseka kokulala, kunye nokuvuselela amaziko athile obuchopho.
Ukuxilwa kweSpain kufuneka kuhanjiswe ngaphaya kwesithathu ukuqeshwa.
Emva kweseshoni, inkqubo ye-lymph drainage isebenzayo, ukujikeleza kwegazi kuphucula, kwaye ulusu lugcwele i-oksijini. Ngenxa yoko, i-edema iyanyamalala, ubuso obunqambileyo buyacaca, kwaye ulusu luhlala lutsha kwaye lukhazimulayo.
Xa inkosi iqhuba iseshoni, isebenzisa iifrimu ezikhethekileyo ezifanelekileyo kulusu lolusu kunye neoli. Izinto ezinomsoco nge-massage zingena kwiifomthi zenze ulusu lube selutsha kwaye lube lutsha, kwaye akukho mkhondo oshiyekileyo wokuxinzelelo.
Amasu kunye nobuchule obuhle bokusilalisa iSpeyin kuphuza ukuguga kwesikhumba. Izigulane eziye zazama le ndlela, zibango ukuba umphumo sele uvele ubonakala kwiinkqubo zokuqala. Ewe, ukuba ubhekane neengxaki azibuyanga kwakhona, musa ukuyeka isigxina, kufuneka uphumelele kwiinkqubo ezithile zonyango kwaye ukongezelela, ukuphinda uphinde uphinde uphinde uqhubeke. I-Cosmetologists ithi le massage inokuphesela ukungenelela kwindlela yokuhlinzwa.
Ukusikwa kweSpain kunzima kakhulu kwindlela yokusebenza, ukuze kufezekiswe umphumo oyifunayo, kubalulekile ukuba ugcine ngokucophelela ubuchule kunye nemithetho, kunye nolwazi olunzulu lwe-anatomy. Njengoko sele uqondayo, ukuxilonga okunjalo kufanele kwenziwe ngcali yeengcali. Yingakho ngaphambi kokuba ubeke ubuso bakho nomzimba kumasseur, qiniseka ukuba ungumfundisi ofanelekileyo.
Ukusikwa kweSpeyin kubantu abatsha
Kwabesetyhini abasebatyhini inkqubo ye-nervous is overweight, ngoko kwenzeka ntoni ngokwenene ayisoloko iqondwa ngokwaneleyo. Ngenxa yoko, ukulinganisa izihlunu zihlala zisesigxina, kwaye ukuba ingasuswanga, kuya kubakho imincinci encinci ebusweni. Ngoko ke, amantombazana amancinci kufuneka aphendule kwiingcali zobugcisa, okujoliswe ekunciphiseni uxinzelelo kunye nokuphumula. Kwaye emva kwenkqubo enjalo, ungaqala ezinye izenzo zesikhokelo eziya kuthintela onke amanqanaba okwakhiwa kwesikhumba.
I-Massage yaseSpain emva kweminyaka engama-40
Abafazi abaneminyaka eliphakathi kwindawo yokuqala bafuna ukususa umbane kwi-girdle yegxina kwinqanaba lomzimba. Ngokuqinisekileyo abo basetyhini basebenza kwaye yonke imihla bayayifumana ulwazi olutsha, ngoko ke bafumana iimvakalelo ezahlukeneyo, ngoko kufuneka usebenzise ubuchule be-neurosedate. Kulo nyaka, i-vascular system ikhathele kakhulu, ngoko idinga amanzi. Ngaba ubomile imibimbi ye-nalbu, kwi-fold nasolabial nakwindawo yamehlo. Le nkqubo iya kukuvumela ukuba ulahleke ukubonakala kwemibhikano emitsha kwithuba elithile. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwi-chin, apha kuyimfuneko ukuba kusebenze ukusetyenziswa kwamanqanaba kwinqanaba elisezantsi. Indawo yentamo nayo idinga amanzi kunye nokucaciswa komgca wegama.
Emva kokubuthelela umphumo ongcono, kufuneka ubeke imaski yokwenza imodeli kwindawo ekubhekiselele kuyo.
Izibonakaliso zokusikwa kweSpeyin:
ukungondleki kweeseli kunye nezicubu
ukunciphisa uxinzelelo lwegazi
ubudala kunye nobunzima obunzima
phuculo lwe tone
izifo kwisigaba esibucayi,
i-asthma ye-bronchial ngexesha leentyantyambo (ngoMeyi-Juni),
Ukutya ebomini bomntu: amazambane
Iigallic: izakhiwo ezifanelekileyo, zokupheka
Itiyi eluhlaza kunye nesifo se-thyroid
Ukucwangcisa ngaphakathi ngaphakathi
Indlela yokuphucula umboniso ngoncedo lweempendulo zendoda?
"UTyakin sibori" i-dessert yaseJapan
Inkukhu yenkomo kwi-honey-sauce
Unina omncinane eRashiya
I-pie ne-blueberries kunye neeperesi ngendlela ye-rustic
Ukunakekelwa kweNkhumba emadolweni
Izakhiwo zonyango yeoli yeentlanzi
Indlela yokuthetha nabantwana kunye nabaselula malunga nokulalana ngokwesondo